यस्ता फाइदा हुन्छन् मोटी केटीसँग बिहे गर्दा - Everest Dainik - News from Nepal
यस्ता फाइदा हुन्छन् मोटी केटीसँग बिहे गर्दा
सुन्दरताका प्रतिमानहरू युग अनुसार फेरिइरहन्छन् । तर हरेक पुरुषको सपना भने उसकी पत्नी सुन्दर होस् भन्ने नै हुन्छ । अचेल खुपै चलेको सुन्दरताको प्रतिमान भनेको पातलो र छट्किएको ज्यान नै हो । त्यसैले केटाहरू पातलो र छटकिएको शरीर भएकी केटीसँग विवाह गर्न लालायित हुन्छन् ।
तर अधिकांश पुरुषहरूको कम छनौटमा पर्ने गरेकी मोटी केटीहरूसँग विवाह गर्नुका पनि बेग्लै फाइदा छन् । यो वास्तविकता थाहा पाएपछि तपाईं मोटी केटीहरूसँग विवाह गर्नेहरू त साँच्चिकै भाग्यमनी रहेछन् भन्नु हुनेछ । आखिर के हुन् त मोटी केटीहरूसँग विवाह गर्नुका फाइदा ? हेरौं…
१. खर्चको बचत
यसको पहिलो फाइदा के हो भने, मोटी केटीसँग विवाह गरेपछि सपिङमा तपाईको धेरै पैसा खर्च हुँदैन । किनभने मोटी केटीहरु कपडाका मामलामा धेरै सौखिन हुँदैनन् ।
२. सफा हृदय
यसको फाइदा के हो भने मोटी केटीहरु पातलो ज्यान भएकी केटीको तुलनामा मनले धेरै सफा हुन्छन् । मोटी केटीको मनमा कसैपृति घृणाभाव हुँदैन । साथै मोटी केटी आफ्नो ससुराली पक्षका व्यक्तिको धेरै ख्याल राख्छिन् ।
३. मिठो खान पाइने
वैज्ञानिक खोजबाट पनि यो पत्ता लागेको छ कि, मोटी केटीसँग विवाह गर्ने केटाहरु जीवनमा धेरै खुसी हुन्छन् । यदि तपाईं खानपिनमा सौखिन हुनुहुन्छ भने पनि मोटी केटीसँग विवाह गर्नुको फाइदा हुन्छ । किनकी मोटी केटीहरु पनि खानपिनका लागि धेरै सौखिन हुन्छन् ।
३. पतिलाई माया गर्ने
४. आत्मबल बढाउने
यस्तै मोटी महिलासँग विवाह गर्ने पुरुषहरुमा आत्मबलको विकास हुने पनि एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । उनीहरु हरेक अप्ठेरो समयको सजिलै सामना गर्नसक्ने हुन्छन् ।
यस्तै मोटी केटी आज्ञाकारी पनि हुन्छन् । जसले गर्दा श्रीमतीले श्रीमानले भनेको कुरा सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण बन्छ । यस्तोमा पति–पत्नीबिच झगडा हुने संभावना पनि निकै कम हुन्छ ।
ट्याग्स: Benefit, fat girl, Marriage